Inona no Tokony Ataon’i Singapaora Manoloana ny Krizin’ny Mpitsoa-ponenana Rohingya? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Jona 2015 3:36 GMT
Vakio amin'ny teny Français, македонски, Română , Español, English
Mpifindra monina avy ao Myanmar sy Bangladesh tonga ao Langsa, Atsinanan'i Aceh ao Indonesia. Mpifindra monina 678 farafahakeliny no tonga amin'ny sambo ary ao anatin'ny tsy fahasalamana. Sary avy amin'i Dodi Kurniawan, Zon'ny mpamorona @Demotix (5/16/2015)
Tsy taitra i Singapaora nandritra ny krizin'ny mpitsoa-ponenana Rohingya ao Azia Atsimo Atsinanana na dia nihaona mba hikaro-bahaolana aza ireo mpitondran'ny firenena manodidina.
Vondrona Miozolomana vitsy an'isa ao Myanmar ny Rohingya saingy tsy nety nankatoa azy ireo ho toy ny olom-pirenena ny governemanta. Satria heverina toy ny mpifindra monina tsy ara-dalàna izy ireo ary napetraka tany amin'ireo tobin'ny mpitsoa-ponenana marobe izy ireo, raha nandositra tany amin'ny firenena hafa manodidina kosa ny maro hitady fialokalofana sy asa. Tamin'ny volana lasa teo, nolavin'ireo governemanta Aziatika Atsimo-atsinanana maromaro ny sambon'ny mpitsoa-ponenana Rohingya, fanapahan-kevitra izay niteraka resabe iraisam-pirenena.
Noho ireo mpifindra monina Rohingya an'arivony tafahitsoka an-dranomasina, tara ireo firenena ao Azia Atsimo Atsinanana vao nikoropaka handray fepetra. Nihaona i Malezia, Indonezia ary Thailandy mba hiresaka ny fepetra horaisin'izy ireo ka nanaiky hanome fialokalofana vonjimaika i Malezia sy Indonezia.
Nanome baiko hanaovana hetsika fikarohana sy famonjena hitadiavana ireo sambon'ny mpifindra monina ny Praiminisitra Malaiziana Najib Razak:
Nanome baiko ny @tldm_rasmi sy ny APMM aho mba hanao ezaka fikarohana sy famonjena amin'ny sambo Rohingya. Tsy maintsy misoroka ny fahafatesan'olona isika.
Singapaora kosa tetsy andaniny nilaza ny tsy fahafahany handray mpitsoa-ponenana. “Amin'ny maha-firenena kely amin'ny tany voafetra, tsy afaka handray olona mitady fialokalofana ara-politika na mpitsoa-ponenana i Singapaora, na inona na inona foko na toeram-piavian'izy ireo,” hoy ny mpitondra tenin'ny Minisiteran'ny Atitany tamin'ny mpanao gazety.
Politikan'i Singapaora efa ela mikasika ireo mpitady fialokalofana izany. Ny tati-baovao tamin'ny taona 1978 dia nampiseho ny fandavan'ny Praiminisitra Lee Kuan Yew tsy handray ireo mpitsoa-ponenana Vietnamiana izay nilazany fa: “Tsy maintsy manamafy ny fonareo ianareo raha tsy te-ho latsa-drà ho faty.”
Tamin'ny 2012, mpitsoa-ponenana Rohingya 40 avotra tany an-dranomasina no tsy navelan'i Singapaora hiditra ao aminy.
Nanipika i Glendon Giám ao Singapaora fa henjana loatra ny fepetra noraisin'i Singapaora hanakanana ireo mpitsoa-ponenana tsy hiditra ao amin'ny faritra:
Fampatsiahivina ny lasa: tamin'ny 1975, nanatontosa “Hetsika Kotro-baratra” i Singapaora hanakanana ireo mpitsoa-ponenana Vietnamiana Atsimo tsy hiditra ao amin'ny firenena, nahazoana alalana ny fampiasan-kery mahafaty
Na izany aza, nisioka i Karen Gwee fa efa nandray mpialokaloka Vietnamiana sasany i Singapaora tamin'ny taona 1978 :
Tena tsy misy antony ny tsy handraisan'i Singapaora ireo mpitsoa-ponenana- efa nataontsika izany tamin'ny 1978
Nomena fialokalofana tao amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana voakarakara tsara ihany ireo mpitsoa-ponenana ireo, saingy raha afaka mifindra indray any amin'ny firenen-kafa ao anatin'ny 90 andro.
Sary hafa avy amin'ity faritra ity nozarain’ilay mpitsoa-ponenana Vietnamiena teo aloha Lam-Khanh Nguyen tao amin’ny Facebook.
Nahatonga ny Singapaoreana sasany hiantso ity firenena nosy manankarena ity mba hanome fialofana hoan'ireo mpitsoa-ponenana mamoy fo -na dia vonjimaika aza ny krizy farany .
Ao amin'ny Facebook, manontany ny fandaniana laharam-pahamehan'i Singapaora i Miak Siew:
Ry vahoaka - manontany ahy ianareo hoe avy aiza ny vola raha mampiantrano mpitsoa-ponenana izahay.
Manontany anao aho - Avy aiza ireo dolara an-tapitrisa nolaniana amin'ny afomanga amin'ny fetim-pirenena isan-taona?
Faly ianao mandoro vola an-tapitrisany amin'ny fanipazana jiro any an-danitra, saingy tsy faly amin'ny famonjena aina? Milaza betsaka momba ny laharam-pahamehantsika izany.
Nanamboatra ity afisy ity ilay mpanakanto Singapaoreana Joshua Chiang ao amin'ny Cerealbox Studios ho fanohanana ireo mpitsoa-ponenana Rohingya. Nahazoana alalana ny famoahana ny sary
Mandritra izany, manohana ny tsy fanomezan-tanana ataon'ny governemanta ny Singapaoreana sasany izay matahotra sao ho fandaniam-bola ny fampiantranoana ireo mpitsoa-ponenana.
Manazava ao amin'ny Facebook ny antony ahatakarany ny fepetra noraisin'ny governemanta i Wei Wen:
Ny tena teboka lehibe kokoa dia hoe mitondra mankaiza izany rehetra izany? Ahoana no hametrahana azy ireo indray? Afaka tena hiditra sy hiharo ao anatin'ny fiarahamonina ve izy ireo? Hampiantrano azy ireo ampolony taona na mihoatra izany ve isika? Hafiriana alohan'ny faharavan'ny fiantrantsika ka tsy misy safidy hafa ankoatra ny manohy ny efa natao? Jereo ny zava-isy amin'ireo safidy rehetra ireo ary lazao ahy fa tsy tokony hanana fo hiaro ny tombontsoa tsara indrindra hoan'ny vahoakany ny governemanta?
Manolo-kevitra kosa ilay bilaogera ara-politika fa tokony handefa ireo tafika an-dranomasina mankany Myanmar ny firenena mba hanakana ireo mpanondrana olona an-tsokosoko sy ireo lasibatry ny fanondranana olona:
Mora kokoa ny manao fisafoana ny morontsiraka eo amin'ny 300 - 400 km eo noho ny mijanona eo antenantenan'ny Ranomasina Andaman ijerena sambon'ireo mpanondrana olona an-tsokosoko. Mampihena ny vola lany amin'ny fitsaboana ilaina ny fakana ireo olona dieny mbola tsy noana sy mangetaheta izy ireo.
Tokony hanakana sy hanara-maso ireo sambo rehetra miala ao amin'ny fari-drano Birmana ny tafika an-dranomasina. Tokony esorina ireo mpitsoa-ponenana ary raofina ny sambo. Mazava ho azy fa tokony ampidirina am-ponja ireo mpaka an-keriny sy ireo mpandraharahan'ny sambo.